खै शासक र नेतामा देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी ! – Mission Khabar
खै शासक र नेतामा देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी !
मिसन खबर १० असार २०७८, बिहीबार १४:२८
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको शिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोश्रो पटक मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पनि एक महिना वितेको छ । यो बीचमा राजनीतिक दाउपेचका थुप्रै्र दौडधुप र भेला बैठकहरु भएपनि आम नागरिकले कत्ति पनि चासो दिएका छैनन ।
नेताहरुको स्वार्थको लडाईमा नागरिकले साथ दिउन पनि कसरी, यहाँ कोरोनाको कहर छ, मनसुनी वर्षाका कारण बाढी र पहिरोले कहिले कतिबेला कस्लाई बगाउने पुर्ने हो भन्ने डर छ । बन्दाबन्दी केही खुकुलो बनाइएपनि रोग र भोकको चिन्ता उस्तै छ । महंगीको मार त कसैले सुन्नेवाला छैन यहाँ । सरकारमा बसेका र विपक्षी गठबन्धन कसेकाहरुलाई केबल चाहिएको छ, सत्ता, शक्ति र पैसा । कोरोना रोकथाम र खोपको चिन्ता छाडेर कुर्सी बचाउन, शक्तिमा बसिरहँन एकपछि अर्को असंबैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओली हुन वा विपक्षी गठबन्धन बनाएर कुर्सी छोड भन्ने एमालेकै माधबकुमार नेपाल, कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव नै किन नहुन, सबैको बिगत विश्वासयोग्य छैन । यी सबै नेताहरु पद र अवशरका भोका छन्, हुन भन्ने आरोप लागिरहेको छ ।
अब त हुँदा हुँदा राजनीति गर्ने नेताहरु असफल भए । हरेक राजनीतिक झगडा र किचलोको ब्याख्या अदालतबाट खोजिन थालिएको छ । यो तत्कालका लागि जायज भएपनि यसले राजनीतिप्रति अदालतको अनावश्यक महत्वकांक्षा बढाउनसक्छ । कार्यपालिका असफल हुँदा व्यवस्थापीका माथी धावा बोलिएको छ । अनि यो अन्यौलतामा न्यायपालिका सक्रिय बन्दा समेत गलत नजिर बस्नसक्छ । अबपनि प्रबृत्ति सुध्रिएन भने बृद्धभत्ता खाने उमेरका बयोबृद्ध नेताहरुको भबिश्य सकिने मात्रै होइन, देश र जनताकै भविश्य अन्यौल बन्नसक्छ ।
युवाहरुमा राजनीतिप्रति बढेको बितृष्णा रोक्न दलहरुबीच संवादको थालनी गरौँ । रोग र भोगमा छट्पटिएका नागरिकको चित्कार सुनौँ, कोरोना खोपको जोहो गर्दै बाढी पहिरोको जोखिम रोक्न शासक, प्रशासकसँगै हरेक दलका नेता र तपाई हामी सबै जिम्मेबार बनौँ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय / ब्लग
कोभिड–१९ का जस्तै लक्षण मानसिक रोगमा पनि देखिन्छन्, कसरी छुट्याउने…
देश र जनताका पक्षको गफ, व्यवहारमा पद, अवशर र पैसाको…